Tsy misy fanomanana: tapaka ny rano amin’ny toerana maro eto Antananarivo | NewsMada
Tsy misy fanomanana: tapaka ny rano amin’ny toerana maro eto Antananarivo
Hatry ny alatsinainy teo, fay rano indray ny mponina teto Antananarivo. Tsy nandeha ny ranon’ny Jirama, efa ho telo andro izao. Tsy nisy ny fampilazana mialoha nataon’ny Jirama fa tampoka tamin’ny mponina ny fahatapahan-drano.
Anisan’ny lasibatra ny faritra Ivato, Ambohibao, Andranomena, Talatamaty, hatrany Ambohimanarina rehetra iny. Torak’izany ny any Itaosy, Andoharanofotsy, Ampitatafika, Isotry….
Milahatra andro amin’ny alina ny olona eny amin’ny paompim-pokonolona. Manomboka amin’ny 12 ora alina ka hatramin’ny 3 ora maraina ihany ny rano no mandeha amin’ny toerana sasany.
Ho an’ny toerana hafa kosa tsy mandeha amin’ny fotoana rehetra mihitsy izany rano izany. Misy indray, tanàna iray kanefa ny ampahany mandeha andro aman’alina ny rano fa ny ampahany tsy mandeha mihitsy.
Sahirana ny mponin’Antananarivo manoloana ny tsy fisian’ny rano. Voatery mividy rano efa voatsinjara amin’ny tavoahangy eny amin’ny mpivarotra omena ny zazakely izay tsy afaka mihafy.
Matsaka amin’ny vovo kosa ny sasany amin’ireo tanàna manana izany. Tsy nisy ny filazana mialoha nataon’ny orinasa Jirama mba nahafahana niomana ka nanangonan-drano tamin’ny barika nentina niatrika ny fahatapahan-drano. Very fanahy mbola velona ny rehetra miandry ny rano hiverina, tsy fantatra na rahoviana na ho rahoviana.